राष्ट्रिय स्वाभिमानको मुद्दा र नेपालका ठूला मिडिया | दर्पण दैनिक
राष्ट्रिय स्वाभिमानको मुद्दा र नेपालका ठूला मिडिया
प्रकाशित मिति: २०७७ जेष्ठ ८ गते ११:२१
संविधान निर्माणपछि अब नेपाली जनता राजनीतिक हिसाबले अधिकार सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै देशलाई समृद्धि र बिकासको बाटोमा अगाडि बढाउने उद्देश्य सहित बलियो र स्थिर सरकारको लागि नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई झण्डै दुई तिहाइको मत दिए । संविधान त बन्यो, यसलाइ कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु चुनौती थियो नै ! किनभने संविधान मान्दैनौँ भनेर भारतले गरेको नाकाबन्दीमा सिमानाका तिर गएर सुत्नेहरु अझै बाँकी थिए। त्यस सँगै हामीले स्थानीय र प्रदेश को निर्बाचन त गर्यौं ,हामिसंग एउटा टेबल कुर्सी पनि थिएन। भौतिक संरचनाको त कुरै छोडौँ। प्रदेश सभाको निर्बाचन त भयो,प्रदेश सरकार पनि गठन भयो, तर भौतिक संरचना लगाएत आवश्यक पूर्वाधार केही पनि थिएन।
यी सबै कुराको व्यवस्थापन यही सरकारले गरेको थियो। सँगसँगै चीनको राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराएर चीनसँग नाका खोल्दै नेपाललाई भुपरिबेष्टितबाट भुजडित राष्ट्रको रुपमा अगाडि बढाउनु यो बास्तबमै एतिहासिक थियो। नेपाल एउटा स्वाधीन राष्ट्र हो ,यो कसैको गुलाम होइन भनेर प्रमाणित गरिएको गौरबशाली क्षण थियो। ठुला ठुला बिकासका आयोजनाहरु अगाडि बढन शुरु गरेका थिए। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुको कानुन व्यबस्थित भएर अगाडि बढन शुरु गरेका थिए। नयाँ संविधान अनुसारको धेरै कानुनहरु बनाएर अगाडि बढ्न सरकार सफल हुँदै थियो। ललिता निवास जस्ता हिजो हडपिएका सरकारी जग्गाहरु धेरै हेक्टर जमिन सरकारले फिर्ता गरेको स प्रमाण छ। सुन काण्ड का अपराधी हरुको अदालतमा मुद्दा चलेको छ र धेरै जेलमा छन। ईतिहासमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचारको केस यो सरकार बनेपछि छानबिन भएको छ र भ्रष्टाचारीहरु जेल गएका छन, जुन अख्तियारको रेकर्ड हेर्दा थाहा हुन्छ।
तर नेपालका ठुला भनिएका केही मिडियाहरुलाइ यो कुरा पचेको रहेनछ ! निरन्तर उनीहरु सरकारको सानासाना छिद्रहरु खोजेर अनावश्यक भ्रम छरेर नेपाली जनता हरुलाइ दिग्भ्रमित गर्ने काममा लागे। साँचो कुरा पनि १००० पटक झुट भनेपछी त्यो झुट नै ठहरिन्छ भने जसरी पछिल्लो समय यो तरिकाबाट सरकारका विरुद्ध भ्रम छर्न र विरोधी जनमत निर्माण गर्न यी मिडिया हरु सफल भएकै हुन। अरु त अरु नेपाली बुद्दिजिवी भनिने हरु पनि यिनै मिडियाको आधारलाई प्रमाण बनाएर आफ्नो धारणा बनाउन लागे। यसले नेपाली समाजलाई अझै दिग्भ्रमित बनाउदै लग्यो। यसले सरकार विरुद्ध मात्रै होइन, यो व्यवस्था र संघीयताको बारेमा नै मान्छे हरुलाइ नकारात्मक मानसिकता बनाउने अवस्था को सृजना भयो। पछिल्लो समय जब यो सरकारको दुई बर्ष पुगेको दिन ठुला मिडिया हरुले अब दुई बर्ष पुग्यो यो सरकार बिरुद्द अबिश्वास को प्रस्ताव राख्न पाइन्छ भनेर ठुलाठुला हेडलाइनमा समाचार लेखेर अस्थिरताको बीउ रोपे। प्रतिपक्षी दल लगाएत पार्टी भित्रका लोभिपापीहरु यिनै मिडियाका पछि लागेर हाम्रो देश मात्रै होइन मानव जातिनै कोरोना भाइरससँग लडिरहेको अवस्थामा सरकार ढाल्ने योजनामा लाजमर्दो तरिकाले नाङ्गो नाचको प्रदर्शन गरे। तर नेपाली जनताको अपार समर्थनले र प्रधानमन्त्रीको बलियो आत्मविश्वासले यस्ता अस्थिरता मच्चाउन खोज्नेहरुको षड्यन्त्रलाई निर्ममता पुर्वक खारेज गरिदियो। फेरि यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रो छिमेकी भनिनेले हाम्रो भुमिमा बाटो उद्घाटनको नाटक मन्चन गरेर हाम्रो भुमी सिधै हडप्ने दाउमा लाग्यो।
तर नेपाल सरकारले त्यसको कडा प्रतिबाद गर्यो। प्रतिबाद मात्र गरेन, इतिहासका शासकहरुले कसैले हिम्मत नगरेको छुटेको भुभाग सहित समटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्यो र आफ्नो भूमि कुनै हालतमा फिर्ता लिने उदघोष गर्यो। यो हामी सबै नेपाली जनताको गौरवको कुरा हो। हामी नेपालीहरुको स्वाभिमानको विजय हो। हाम्रो स्वाधीनताले फेरिपनी जितेको दिन हो। हाम्रो राष्ट्रियताले जितेको दिन हो। शायद सगरमाथाले पनि आफू नेपालमा हुन पाएकोमा गर्व गर्यो होला। गौतम बुद्ध ,भृकुटी लगाएतले आफुलाइ नेपाली हुन पाएकोमा कति गौरव गरे होलान ! सहिदहरु ले कति ताली बजाए होलान !जो राष्ट्रलाई माया गर्ने तर आफुले गर्न चाहेर पनि गर्न नसकेको काम आज केपि ओलिले गरेर देखाउदा कति धन्यवाद दिए होलान !
तर नेपालाका ठुला मिडिया हरुको यो कुरा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। उनीहरुले यसलाइ कति पनि महत्त्व दिएनन। लाजगालले सानो समाचार बनाउने सम्म देखियो। तर राष्ट्रियताको सवालमा यति ठूलो काम हुँदा सबै राष्ट्रलाई एकताबद्द बनाएर यसको पक्षमा माहोला सृजना गर्ने काम ठुला भनिएका मिडियाको हुन्थ्यो,तर यिनिहरुलाई यो कुराले छोएन। यसको बिपरित आज भारतीय मिडिया हरु एकजुट भएर नेपाल विरुद्ध बिषबमन गरिरहेका छन। नेपाली चेली मनिषा कोइरालाले के नेपालको पक्षमा बोलेकी थिइन, यिनका बिरुद्द भारतीय मिडिया हरु एकजुट भएर खनिएका छन। तर हाम्रा मिडिया हाउस हरु खोइ त ? कहाँ छन् यिनिहरु? यिनलाइ देश र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा बोल्न कसले रोकेको छ ?
हामीले मान्नै पर्छ बरु साना भनिएका मिडियाहरु कतिपय अनलाइन पत्रिकाहरु ले सुचना लाई सहि ढङ्गले प्रसारण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन। जसले सकारात्मक प्रयास गरेका छन उनिहरुलाइ धन्यवाद दिनै पर्छ,तर उनिहरुको आवाज सानो भएको छ। अब यो आवाज लाई बढाउनु पर्दछ। नेपालका ठुला मिडिया र भारतको मिडिया हरुका बीचमा एउटा कुरा चाहिँ गजबले मिलेको देखियो। एक हप्ता अगाडि नेपालका ठुला मिडियाहरुले चिनको राजदुतले नेपालको सरकार टिकाएको हेड्लाइन लेख्ने ठुला मिडियाका जस्तै समाचार आजभोलि भारतीय मिडियाहरुले ठूलो ठूलो स्वरमा चिच्यायिरहेका छन। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालका ठुला भनिएका मिडियाहरु र भारतका मिडियाको समाचार बनाउने कारखाना एउटै हो। यिनीहरु नेपालको लागि नेपाली जनताका लागि होइन,अरुको हण्डी खाएर अरुकै लागि काम गरिरहेका छन। जुन गम्भीर बिषय हो। नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा त झन यो गम्भीर बिषय हो। यी ठुला भनिएकै मिडियाको कारण आज नेपालमा सन्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता कम हुँदै गएको छ। यहि तरिका हो भने अरुको हण्डि खाएर नेपाल सरकार र नेपाली जनता विरुद्ध डण्डी बजार्ने तिमिहरुका मिडिया हाउस नेपाली जनताले बन्द गर्ने दिन आउनेछ। आगे आपकी मर्जी !